Xukun Dil Ah Xal Ma U Noqon Karaa Kufsiga? – somalilandtoday.com
Xukun Dil Ah Xal Ma U Noqon Karaa Kufsiga?
(SLT-Hindiya)-Aqalka hoose ee baarlamaanka dalka India ayaa isniintii la soo dhaafay ansixiyay hindise-sharciyeed dil ku xukumayo qof kastaa oo lagu helo dambi ah in uu kufsaday gabar da’deeda ka yar tahay 12 sano.
Kufsiyada ka dhanka ah carruurta ee ka dhaca dalkaasi India ayaa kordhay sanadkii 2016, waxaaxna dhacay ilaa19,765 kiis oo kufsi ah, halka sanadkii 2012 uu ka ahaa 8,541.
Su’aasha ah xukunka dilka ah ee lagu xukumayo dadka kufsiga geysta in uu mirodhal yahay iyo in kale ayaa ah mid dunida oo dhan aad looga doodayo, waxaana tusaale mar kastaa loo soo qaataa waddamada deriska ah oo xukunkaasi uu ka jiro balse wali kufsiga aan xal loo helin.
“Xitaa haddii sharcigani uu kufsiga la mid dhigayo argagixisada, ilaa iminka wax isbadalay ma jiraan. Kufsiga ayaa sii kordhaya oo kaliya halka in xukun lagu rido eedeysaneyaasha dambiyada kufsiga lagu helay uu sii yaraanayo,” ayay tiri Seynab Maalik, oo ka tirsan hay’adda Justice Project Pakistan oo ka hawlgasha gobolka Lahoor.
Waxa ay sheegtay in arrintani ay sabab u tahay “booliska oo ka xagliya dumarka, mararka qaarna kaba caga jiidaya in ay diiwaan geliyaan kufsiga loo geysto dumarka, iyaga oo og in arrintaasi lagu muteysan karo dil, gaar ahaanna haddii kufsigaasi ay ku lug leeyihiin rag badan. Si dilkaa looga badbaadana, kiiska ayaa lagu qoraa hal nin oo kaliya.
“Dhibaatada ayaa waxa ay tahay in dhibbanayaasha kufsiga oo inta badan aanan soo sheegin kufsiga loo geysto, sababtoo ah dadka kufsigani geysanaya ayaa inta badan ah kuwo aqoon u hel dhibbanaha ay kufsanayaan, waxaana jiraya arrimo badan oo fududeynaya in dhibbanahaasi iyo qoyskiisuba aysan kufsigaasi ku wargelin booliska,” ayuu yiri Dr Anup Surendranath, oo ah madaxa mashruuca 39A, oo ah ay waddo hay’ad u ololeysa arrimaha caddaaladda.
Waxa uu intaasi ku daray in “marka la eego xaaladdaasi uu xukunka dilka ahi dhibaato ku yahay xal u helidda kufsiga, maadaama dhibbaneyaashu ay ku adkaaneyso in qof ay aqoon fiican u leeyihiin ay arkaan isaga oo dil lagu xukumayo.”
Warbixin saandkii 2012 hay’adda xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch ay ka soo saartay dalka Afqaanistaan ayaa lagu sheegay in “halkii ay taageero ka raadsan lahaayeen booliska, waaxda garsoorka iyo dowladda, ay dumarka la kulmaan ciqaab, iyadoo lagu ceebeeyo wixii ku dhacay.”
‘Caddaaladda oo soo daahda’